Tombony amin'ny fitetezana an'izao tontolo izao izay hahatonga anao ho tsara kokoa | Vaovao momba ny dia
Tombony amin'ny fitetezana an'izao tontolo izao
Betsaka ny olona maniry mitety izao tontolo izao ary afaka mankafy ny fahatsapana fahalalahana anananao isaky ny mahita toerana vaovao ianao. Ny fitetezana izao tontolo izao dia midika fanitarana ny sainao, ny fahalalanao ary ambonin'izany rehetra izany, ny fianarana avy amin'izao tontolo izao sy avy amin'ny olona. Raha misy zavatra torohevitra omen'ny rehetra anao dia ny fivezivezena bebe kokoa.
Tsy midika akory izany hoe handeha hanao vakansy ianao ary handamina ny zava-drehetra hatramin'ny antsipiriany farany, ny tiako holazaina dia ny fitsangatsanganana amin'ny toerana tsy mbola hitanao hatrizay, amin'ny fomba malefaka ary ny fiainana mihitsy no manome anao fahafahana hahafahanao hianatra zava-baovao. Manome tombony lehibe anao ny fitsangatsanganana ohatra:
Manampy anao amin'ny fitantanana tsara kokoa ny olana iray
Mamolavola anao amin'ny maha olona azy io
Mahafantatra kolontsaina hafa ianao
Mianatra fiteny vaovao ianao
Ny fitsangatsanganana dia mahafinaritra amin'ny lafiny maro, manampy antsika hahatsapa ny hafiriana, mahatonga antsika maniry fatratra hahita toerana vaovao, ireo kolontsaina misy traikefa, sakafo azonao andramana, mihaona olom-baovao. Saingy ny ankamaroantsika dia mihevitra amin'ny fomba diso fa tokony hiandry mandra-pahatongan'ny taona hahitantsika izao tontolo izao isika. Tsy misy na inona na inona lavitra ny marina, dia fotoana mety foana izao fivezivezena izao. Te hahafantatra ny antony ianao? Jereo ny tombony azonao.
1 Ho fantatrao tsara kokoa ny tenanao ary ho afaka hitantana olana iray ianao
2 Mahafantatra kolontsaina hafa ianao
3 Mianatra fiteny vaovao ianao
4 Mamolavola anao amin'ny maha olona azy io
Ho fantatrao tsara kokoa ny tenanao ary ho afaka hitantana olana iray ianao
Rehefa mandeha ianao dia afaka mitsangatsangana ao anaty aminao, satria afaka hahafantatra ny tenanao ianao. Ny fitsangatsanganana dia fampiasam-bola tsy mampino ao aminao izay tsy azonao atao ambanin-javatra. Rehefa mandeha ianao dia ho hitan'ny olona maro ianao, ny kolontsaina sy ny fomba fiainany izay azo inoana fa tena hafa noho ny mahazatra anao. Inona koa, hisokatra amin'ny hevitra vaovao ianao, amin'ny fomba vaovao hahitana an'izao tontolo izao sy ny fiainana, dia hanomboka ho hafa aminao koa izy io. Mbola azo inoana kokoa aza fa ho tsapanao fa maniry tanjona hafa amin'ny fiainanao ianao fa tena hafa noho ireo izay ananan'ny olona matetika - asa, trano, trano, asa.
Raha mahatsapa ianao fa voafandrika ao anaty eritreritra misavoritaka tsy misy fiafarana, satria tsy fantatrao izay tanjonao amin'ny fiainana dia tsy fantatrao izay tianao hatao amin'ny fiainanao, amin'ny asanao na amin'ny lalam-pampianaranao, dia manoro hevitra anao aho mandehana dia ... ho gaga ianao amin'ny valiny ao an-tsainao.
Ahitana firenena marobe izao tontolo izao fa tsy ny olona rehetra no mitovy. Rehefa mandeha ianao dia hanana fotoana tsara hihaonana amin'ny olona avy amin'ny firenena samy hafa sy ny toerana samihafa. Eo amin'ny fiainana, iray amin'ireo fahaiza-manao ara-tsosialy lehibe indrindra ny fianarana mifanakalo ary mifampiresaka amin'ny olon-kafa, na dia samy hafa tanteraka aza isika.
Samy manana ny fomba fampitana azy isika rehetra, ary indraindray tsy izy rehetra no mandaitra. Ny olona sasany dia sahirana maneho hevitra satria tsy mivoatra tanteraka ny fahaiza-manao ara-tsosialy. Ny fitsangatsanganana sy ny fifandraisana amin'ny olona isan-karazany dia hanampy manangana na manatsara ny fahaiza-manao ara-tsosialy kely ezaka fotsiny.
Tsy ianao irery no hivezivezy hanatsara ny fahaizan'ny fifandraisana, fa ankoatry ny fahatokisanao tena, noho izany serasera izany dia hahafahanao mampita mazava ny hevitrao sy ny hevitrao amin'ny fanehoanao na dia olona hafa avy amin'ny kolontsaina samihafa aza ianao. Azo antoka fa hahatakatra anao tanteraka izy ireo.
Manaraka ny lohahevitra kolontsaina, misy ny kolontsaina erak'izao tontolo izao. Amin'ny maha mpandeha tsara anao dia tokony hanaja ny kolotsaina any amin'ireo firenena andehananao ianao. Ny toerana sasany dia hanana kolontsaina maoderina kokoa, fa ny hafa kosa hanana finoana sy fomba amam-panao nentin-drazana.
Rehefa afaka miaina ireo kolontsaina samihafa ianao, dia ho fanabeazana be ho anao koa izany. Mpandeha maro no mitady kolontsaina hafa ankoatry ny azy manokana mba hianarana avy amin'izy ireo sy hanokafany ny sainy amin'ny tontolo vaovao. Afaka mianatra manaja ny eritreritry ny olona an-tapitrisany eto amin'izao tontolo izao ianao. Ho fantatrao ny fomba fahitan'ny olona ny tenany sy ny fahitany anao, ny fahitany ny olona ary ny fahitany ny tenany ao anaty vondrona iray, ny kolontsaina dia azo faritana ho fomba fiainana iray manontolo, noforonin'ny vondron'olona mandalo hatramin'ny nifandimby hatramin'ny taranaka fara mandimby.
Afaka mianatra fiteny vaovao ianao nefa tsy tsapanao akory. Miaraka amin'ny faniriana te-hifandray amin'ny hafa, dia ho afaka hampihatra ireo fiteny saika tsy tsapanao akory izany, zavatra iray izay hahatonga anao hahay tsara kokoa ny fitenin'ny firenena nandehananao namangy, na farafaharatsiny. .. ho tsapanao ny ezaka goavana hataonao, fa amin'ny fahafinaretana- mifandray amin'ny hafa.
Azonao atao aza ny mahita ny majika ananan'ny fifandraisana rehefa tsy misy fiteny miteny mandeha.... ny tenin'ny famantarana sy fihetsika no tena mahay mifankahazo ... Na dia mandeha miaraka amin'ny kahie sy penina aza ianao, dia afaka manoritra izay tianao ampitaina! Ho takatr'izy ireo haingana ianao.
Na dia te hanana fahalalana aza ianao dia afaka mianatra anglisy kely alohan'ny hanombohana ny dianao, satria na aiza na aiza alehanao dia hisy foana ny olona afaka mifandray aminao amin'ny teny anglisy. Na dia any ivelany ianao ary tsy mahay fiteny sy mahatsapa fa mila mianatra dia azonao atao foana ny mampiasa Fampianarana voalohany, orinasa iray manolotra fampianarana fiteny any ivelany. Afaka mianatra ilay fiteny ilainao ianao.
Fa ny tsara indrindra dia tsy misy fisalasalana fa ny fitetezana olona eran'izao tontolo izao dia hanampy anao hamorona olona. Hahita olona maro ianao, kolontsaina maro, fomba fifandraisana ... izay tsy azo ihodivirana fa hitombo ny sainao ary hiova ny fonao. Ho tonga olona ianao ary ho tsapanao fa tena hafa lavitra noho ny noeritreretinao ny fiainana. Fantatrao angamba fa tsara kokoa sy mahafinaritra kokoa ny fiainana, rehefa fantatrao ny toerana maro eto an-tany. Izy io dia traikefa izay horaisinao amin'ny fiainanao rehetra, fa ho fahalalana sy fo lehibe kokoa sy manetry tena koa io.
Tianao ny mandeha? Inona ny vazan'izao tontolo izao tianao haleha? Sa iza amin'izy ireo no tianao indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tombony amin'ny fitetezana an'izao tontolo izao
Pablo Quiroga dia hoy izy:
Salama! 15 taona aho ary te hitety an'izao tontolo izao an-tongotra toy ny nataon'i Nacho Dean tato ho ato, ny hevitro dia ny mianatra mandra-pahatongan'ny 18 taona ary manangona vola hahazoana ireo fitaovako, indrisy amin'ny kapitalisma dia tsy misy maimaim-poana, ary avy eo mandeha irery na miaraka amin'ny zanako vavy hahafantatra ny tontolontsika, tsy misy zavatra tsy vita ary vonona ny hanao izay farany vitako aho hanovana ny tontoloko, lahatsoratra tena tsara! 🙂
Valiny tamin'i Pablo Quiroga
Boracay, ny toerana tsara indrindra any Filipina
Katedraly masin'ny tany ambanin'ny tany any Zipaquirá any Kolombia